Iingcebiso ezili-13 kunye neqhinga lokufumana ubomi obude bebhetri. | I-Androidsis
josema-polyhedron | | Ibhetri, Izaziso, Ukukopela kwe-Android
Ukuba usandula ukuba ne efowuni (oku kuyasebenza Android kunye nezinye iinkqubo ezisebenzayo, nangona ndiza kugxila ngakumbi kukhetho lwee-androids) uyakuyibona loo nto ibhetri kufuneka igcwaliswe phantse yonke imihla, okanye ukuba ungomnye wabo bayisebenzisa kancinci okanye abangayisebenzisiyo i-3G, ukusetyenziswa kwayo kuhlala kude kube Iintsuku ezingama-2-3 ngokusemgangathweni. Kubasebenzisi abavela kwiitheminali Nokia (umzekelo) le yingongoma ayithandeki kwaphela kuba isiko kwaba basebenzisi ukuyilayisha kanye ngeveki (Ayisiwo umthetho jikelele, umsebenzisi ngamnye lihlabathi).
Kule posi ndiza kuzama ukubeka awona manqaku abalulekileyo anakho yenza ibhetri yakho ihlale ixesha elide, okanye kwabo bangayifikeleliyo kwimini yokusebenza abanokuyigqiba ngemigqomo.
Cima unomathotholo xa ungasetyenziswa. Into yokuqala yokucacisa ukuba irediyo ayisiyo FM okanye ayeke ukumamela eziphambili ezingama-40. . Xa ndibhekisa kwirediyo ndithetha ukuba inkqubo yothumelo ii-smartphones kufuneka zinxibelelane nehlabathi langaphandle. Xa sithetha ngonomathotholo, sithetha ngokudluliselwa kwe-GSM okanye i-3G (idatha) yefowuni ngokwayo, ithathela ingqalelo ukuba i-3G isebenzisa idatha engaphezulu kwe-GPRS. Enye unomathotholo ukuba ifowuni inayo yeWIFI okanye uqhagamshelo ngaphandle kwamacingo olutyayo nebhetri eninzi, kwaye ukuba ayizukunxibelelana nayo nayiphi na inethiwekhi eyaziwayo kubhetele ukuyishiya, ukuze ingaqhubeki ikhangela zonxibelelwano. I-Bluetooth ikwayenye inkqubo yokuhambisa ukuba ayizukusebenziseka kukhethwa ukuba uyiyeke. Lonke olu hlengahlengiso lunokwenziwa kwimenyu yokuseta ye-Android okanye kusetyenziswa iiwijethi ezenza umsebenzi ube lula kakhulu (Kukho amakhulu kwintengiso). Cacisa kweli nqanaba ukuba xa sikhubaza ZONKE iiradiyo, kubandakanya umnxeba, siya kushiyeka nesidlali semultimedia esihle, ukuze ngokufanelekileyo sizicime ezo singazukuzisebenzisa.
Sukusebenzisa imo yokungcangcazela. Kutheni le nto siza kusebenzisa imo yokungcangcazela ukuba sinesandi sendudumo esingasivumeli ukuba siphoswe ziifowuni? . Imowudi yentshukumo inokusebenza xa singaqinisekanga ukuba siza kuyiva ithoni, okanye sineselfowuni sithe cwaka, okanye siza kuyiphatha epokothweni apho singeva ukuba iyakhala, kodwa ukuba siyaqaphela iyashukuma. . Ukuba nethoni yokukhala kunye nokushukuma yinkcitho yebhetri.
Sukusebenzisa iTaskkillers. Intoni? ngokwenene? . . Ewe ewe, ngokoninzi lweengcali ze-android ukusetyenziswa kweefaskillers akuyomfuneko (ubuncinci njengohlobo lwe-Android 2.2 Froyo). I-Android inomsebenzi wayo kunye nomphathi wezixhobo, ukuze xa isicelo singasadingeki okanye sisebenzise izixhobo ezigqithisileyo, inkqubo yokusebenza ngokwayo inoxanduva lokuyivala ukwenza ezinye iinkqubo ezifuna ezo zibonelelo. Ukuyicacisa phantsi kweemeko. Masithi ndiqhuba umdlalo kwaye ndifumana iSMS, kulungile, ndiye kwisicelo seSMS kwaye ndishiya umdlalo ngasemva. Umdlalo uza kuba usebenzisa imemori kunye nezixhobo zenkqubo, kodwa nje ukuba ndigqibe ukufunda isms (enye umphathi undibizela eofisini yakhe nge-sms) ndibuyela kumdlalo kwaye uqengqeleka apho ngaphandle kwengxaki. . Ndisandula ukubulala iintshaba ezingama-20 ezisele zenqanaba kwaye ndiza kubona umphathi ukuze ndibone ukuba aphule ntoni amathumbu. Ndivula ikhalenda yam ukuze ndibone ukuba zeziphi izikhundla endinazo emva kwale ntlanganiso kwaye umdlalo ubuyile ngasemva. . Intlanganiso kunye nomphathi ithatha ixesha elide, kwaye umdlalo ukhona, ulindile, kodwa inkqubo ekrelekrele kakhulu kwaye enezinye izinto ezenziweyo ifumanise ukuba umdlalo khange usebenze ixesha elide, kwaye izixhobo zenkqubo ziye zehla , Iyayivala kwaye yenze ezinye iindlela ezifuna izixhobo zayo. Ukugqiba kwam intlanganiso kwaye ndiwuvule kwakhona umdlalo, uya kuyenza kwasekuqaleni hayi apho bendiyeke khona. .
Kulumkele ukusebenzisa imifanekiso eshukumayo. Kulungile, ewe, zipholile kakhulu kwaye ziyashenxa xa amazantsi akho ezele ziintlanzi ezincinci okanye imigca eza kuhamba okanye amantombazana anamalungu athile omzimba aphosiweyo (ndibone yonke into), kodwa lo mfo wamaphephadonga ithambekele ekusebenziseni izixhobo zenkqubo ezixabisekileyo kwaye itye ibhetri yakho ngokoqobo. Kuya kufuneka ukhethe phakathi kokubonisa okanye ukugcina ibhetri.
Kulumkele ukusebenzisa kakhulu iiwijethi Kuyafana nakwimifanekiso yamaphephadonga ophilayo yimeko kunye neewijethi. Nangona uninzi lwenkqubo lujonga ngokusondeleyo kumba wokusetyenziswa, inyani kukuba xa ubeka iiwijethi ezininzi, ubomi bebhetri obuncinci buya kuhlala. Ngaphezulu kwako konke, lumka nabo bajonge i-imeyile, okanye i-Twitter okanye i-Facebook, kuba kuqwalaselo lwabo kudla ngokufika ixesha lokuhlaziya idatha, kwaye ixesha elincinci phakathi kokutya libekiwe, ibhetri encinci iyakusigcina.
Cwangcisa ixesha lesikrini ukuba lifutshane Ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo, ngokungagqibekanga kusetelwe kwimizuzu emi-3, oko kukuthi, ukusukela xa ndiyeka ukuyiqhuba de isikrini sicime, imizuzu emi-3 idlula kunye nescreen. Eli xesha lingasetwa ubuncinci ngokwaneleyo ukuze lingacimi ngelixa sibukele iindaba, kodwa lifutshane ngokwaneleyo ukuze lingavulwa ngokungabinamsebenzi. Umsebenzisi ngamnye uya kuba nokukhetha kule meko, kodwa mfutshane ngeli xesha, ixesha elide lobomi bebhetri.
Sebenzisa iqhosha "Phuma" kwizicelo ezinazo Ukuba isicelo esiza kuyeka ukusisebenzisa sinika ithuba lokuba "siphume" okanye "Sivale" sisebenzisa eli qhosha ukuze singalishiyi ngokungeyomfuneko ngasemva, nangona besithetha ngalo lizakuzivala ukuba inkqubo ifuna izixhobo, kodwa kungcono ukuba siyavala "ngesandla" kwaye ngenxa yoko asishiyi zixhobo zihlala kwindawo yokuqala.
Ikhamera ekhanyayo, intshaba enkulu yebhetri yakho Ngoku ii-mobiles zibandakanya ukukhanya okukhokelwayo (enye okanye ezimbini) kwaye le nto ibhetri enkulu "yokugwinya", ke ukuba akuyomfuneko ngokungqongqo siya kuthatha iifoto kunye nefleshi kwaye hayi kwimowudi yokuzenzekelayo. Ngaphandle kokusebenzisa ifleshi njengethotshi (kukho iiapps kunye neewijethi eziyivumelayo) kufana nokushiya itephu ivulele ibhetri.
Khubaza idatha yeselfowuni. Nanini na xa ukudluliswa kwedatha kungasetyenziswanga, kuyacetyiswa ukuba kususwe kucinyiwe. Kukho iiterminali ezivumela ukukhubaza idatha yeselfowuni xa ifowuni icimile ngaphezulu kwemizuzu emi-5. Oluqwalaselo lukuSeto-Uqwalaselo- Unxibelelwano olungenazingcingo - iinethiwekhi zeSelfowuni, kwaye zihlala zichaza "Khubaza ukuzingisa kwidatha yeselfowuni" (inokwahluka ngokuxhomekeke kwisiphelo).
Beka iselfowuni apho unokugubungela khona ngakumbi. Umqondiso ophantsi weselfowuni (kuba ukude kwiiseli zomnxeba) ukwabonisa ukusetyenziswa kwebhetri ephezulu, kuba iselfowuni iya kukhangela eyona ndlela yokunxibelelana ngokuqhubekekayo kwaye ukuba ilahlekelwe ngumsitho kwaye kufuneka iphinde iyimise, iya kuthi Yidla kakhulu. Inzima le nto ukuyithobela, kuba akusoloko kukho ingxelo elungileyo apho sisebenza khona okanye sifunda khona, kodwa ukuba siyazi ukuba kukho indawo ethe kratya kwigumbi esikulo, siya kuzama ukushiya ifowuni Pha.
Khubaza i-GPS ukuba akukho mfuneko Ngaba uza kusebenzisa iimephu? Ukubekwa komhlaba kwiifoto? Hayi, ke kutheni uqhubeka ne-gps? . . Kuyinyani ukuba iGPS isebenze kuphela xa isicelo siyibiza, kodwa izicelo ezininzi zisibizela kwiGPS (nditsho nesikhangeli sewebhu), kungcono ukuyicima ukuba ayisetyenziswa.
Ukuvumelanisa rhoqo Oku sele ndikuthethile ngeeWijethi, kodwa kufanelekile ukuba ukuphonononge usetyenziso. Bonke abo bane-Facebook kunye ne-Twitter efakiweyo baya kwazi ukuba ixesha lokuvumelanisa kuzo zombini izicelo zinokuqwalaselwa. Ewe, ixesha elincinci esilibeka kuyo, kokuncinci ibhetri iya kuhlala ixesha elide. Ngaphandle kokuba umsebenzi wakho, ubomi bakho okanye ubudlelwane bakho bothando buxhomekeke ekubukeni i-twitter, qiniseka ukuba ungqamaniso yinto efanelekileyo (rhoqo kwiiyure ezimbini umzekelo, okanye ukuba akubalulekanga kangangezihlandlo ezi-2 ngosuku). Ungagcina ibhetri ngokukhubaza ungqamaniso oluzenzekelayo lweGmail, abafowunelwa kunye nekhalenda, kodwa ukhumbule ukungqamanisa ngesandla amaxesha ngamaxesha.
Sebenzisa iiROM eziphekiweyo. Kuyinyani ukuba iirom eziguqulweyo zisebenzisa ibhetri encinci (ayizizo zonke, kulungile. Kuyinyani oku), kodwa ukuba uyathanda izinto ezikhohlakeleyo kwaye ukhuthazwe ukuba unyothule i-android yakho, unokukhangela uninzi lweeROM ezikwiiforamu ukufumana enye elungele i-terminal yakho kakuhle kwaye ehlengahlengisa ukusetyenziswa kwebhetri ngakumbi.
Ndicinga ukuba ngala maqhinga ali-13 sizakugcina ibhetri kwaye kunokwenzeka ukuba sivumele ukuba sisebenzise iselfowuni ngexesha losuku olunzima ngaphandle kokuhlawulisa ngokungxamisekileyo sikhangela iiplagi ezinje ngobuhlanya. . .
Kukho nesiqwenga seengcebiso endisifundileyo kwaye andinaxanduva laso kwaye anditsho ukuba siyakusebenza (ndikunika sona kuba ukwenza njalo akuphulukani nantoni na) kwimeko yokuba ibhetri yakho ilahlekelwe "yimfutho" yayo kwaye ihlala incinci.
Silayita ifowuni (ikhusi)
Sibiza ibhetri ukuya kwi-100% de kube kukhokele kujike kube luhlaza.
Ukukhupha itshaja (isikhokelo siza kucima)
Xhuma kwakhona itshaja, kwaye xa kukhokelwa kujike kube luhlaza (kuya kuthatha ixesha elincinci) cima ifowuni (ngokupheleleyo)
Susa iplagi kwitshaja kwakhona
Lindela okuluhlaza kukhokelele ukucima kwakhona
Xhuma ishaja kwakhona kwaye ulinde i-LED ukuba iphinde ibe luhlaza kwakhona.
Xa i-LED ijika iluhlaza, yikhuphe itshaja, linda ukuba i-LED icime kwaye ubuyele kwinqanaba lesine ukuphinda le nkqubo (amanyathelo amane ukuya kwesibhozo) amaxesha ali-4. Le nkqubo yokucima isikhokelo ihlala ithatha malunga nomzuzu ngexesha.
Ngumsebenzi onzima, kodwa ngokwabo bawuvavanyileyo, ibhetri iphola kakhulu kwaye ixesha emva kokwenza le nkqubo lide. Ndinyanzelisa ukuba, le nkqubo khange iqulunqwe ndim, kwaye andinaxanduva lomonakalo onokubangelwa yibhetri okanye itshaja (ekungafuneki yenzeke). Ndisenza umda ekuvezeni into egqabazwayo kwezinye iiblogi, iiforamu kunye nezinye "ii-andurriales" kwi-Intanethi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ibhetri » Iingcebiso ezili-13 kunye neqhinga lokufumana ubomi obude bebhetri.
Andikukhuthazi ukwenza "iqhinga" lokuba, kunokubufutshane kakhulu ubomi bebhetri, mandicacise:
Ii-Smartphones, njengazo zonke izixhobo zinenkqubo yokuphepha ukutshaja ibhetri, into eyenziwayo yile kuthintela ibhetri ekubeni ihlawuliswe ukuya kwi-100% yomthamo wayo, iyishiya ikwi- + 90%, kwaye oku kwenziwa kuba iibhetri ezigcwaliswe ngokupheleleyo ukugqithisa kakhulu, oko kunciphisa ubomi babo kwixesha elide.
Ngamafutshane, ukuba kuyinyani ukuba ngale ndlela sifumana ibhetri engakumbi, ngakumbi malunga ne-10% ngaphezulu, ngokufumana iibhetri ukuze zibize i-100% yamandla azo, kodwa konke oko ngexabiso lokunciphisa ubomi obuluncedo beenzame zethu zebhetri, ngumba womntu ngamnye ukuvavanya okona kulungileyo kuye, ukuba ibhetri eninzi kwixesha elifutshane, okanye ubomi obude obuluncedo.
Ewe kuyinyani ukuba kunokuchaphazela ubomi bebhetri, kodwa inqaku ayikokuyenza yonke imihla okanye veki nganye. .
Ngokucacileyo kuxhomekeke kukhetho lomntu ngamnye kwaye emngciphekweni wakhe ukuba angonakalisa ibhetri, okanye anciphise ubomi bayo, kodwa ukuba ibhetri yakho sele ingaphezulu okanye kancinci "ichukumisiwe" inokusetyenziselwa ukuyinika into yokugqibela ubomi ngaphambi kokutshintsha.
Elinye iqhinga eliluncedo kakhulu kukubeka ukuqaqamba kwinqanaba elincinci. Kuyacetyiswa ukuba ushiye iwijethi kwaye ubale kwimemori ukutshintsha imo ukuya kwi-automatic-maximum-etc, kuba xa kukho ukukhanya okuninzi, awuyi kubona phantse nantoni na kwaye kufuneka uyitshintshe ngeliso.
Andizukudlala upelo lwamaNazi, kodwa jonga 😛
Taskiller ewe, kodwa lumka. Kukho iiapps eziqhubeka nokuhlaziya xa zishiywe zivulekile == zisebenzisa idatha == zisebenzisa ibhetri. Awunyanzelekanga ukuba ubulale nayiphi na inkonzo kaGoogle kodwa ukuba umzekelo, iinkqubo zokuthambisa, i-RSS okanye njalo.
I-Android iginya ibhetri isuka kwi-2G / 3G / HSPA iingxaki zokugubungela. Ndiye ndayijonga xa ndihamba. Ukuba uyishiya kwimowudi ye-2G, ifowuni isebenzisa ibhetri encinci.
Kwaye okokugqibela, njengoko u-fer esitsho, i-70% yebhetri phantse ihlala ikwisikrini. Ukuqaqamba okuphantsi kuhlala kuyinto elungileyo. Nangona kungekho nto njengokuyicima ngokukhawuleza xa siyeke ukusebenzisa ifowuni.
Ukwenza i-CPU ye-MHz ayikaze ithethe ukonyusa ibhetri enkulu kum, nokuba yeyiphi na ifowuni.
Ngamnye unamaqhinga akhe okusindisa ibhetri ... Kodwa uhlala uphela kwindawo yokugcina xD
iqhinga le-14 ungayisebenzisi
Inqaku elimnandi, enkosi ngokwabelana. Jonga Ukusuka kwibhetri bendiyifunde ngokwahlukileyo, Ishiye ibhetri ukuba itsibe de icime, ivule kwaye iyeke icime. ide ingavuleki. emva koko yishiye ubusuku bonke Ukutshaja ngefowuni.
Pd into yebhetri ibizwa ngokuba kukuhlengahlengiswa kwebhetri.
Molo, ndinengxaki, kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndathenga iselfowuni elolo hlobo kwaye xa icharge eza nayo ichithwe, xa ndiyifaka kwityala lokuqala andinakukwazi ukuyibiza ngokupheleleyo. Ngoku ibhetri yam ihlala kancinci kakhulu (ndiyibiza nge-8 kusasa kwaye sele ingu-6 emva kwemini kwaye andinalo ibhetri eseleyo) andazi nokuba ndicinge ukuba yiyo loo nto ndenze into engalunganga okanye yeyam izinto, iWhatsApp kunye neWi-Fi ndinazo kodwa akukho enye into kunye nokuqaqamba okuye ku-0.
yi Samsung Galaxy Mini =)
Ndilwenza njani lungasebenzi inethiwekhi yefowuni, kodwa ukuba ndingasebenzisa kuphela iWi-Fi?
Ndinepilisi ye-Android 2.2. Kuyacaca ukuba ibhetri ikhutshiwe kwaye itshaja ayisebenzi ukuphinda igcwalise. Ndizamile ezinye iitshaja kwaye azisebenzi nokuba. Ngaba ukhona umntu onokuthi andinike naziphi na iingcebiso?
Qwalasela i-Android ADB kwi-Debian / Ubuntu